अहिलेकै मोडेलको राष्ट्रपतिमा मेरो चाहना छैन, प्रतिनिधिसभामै जाने तरिका खोज्दै छु : गौतम | Nepal Desh
Home अन्तरवार्ता अहिलेकै मोडेलको राष्ट्रपतिमा मेरो चाहना छैन, प्रतिनिधिसभामै जाने तरिका खोज्दै छु : गौतम
देशभर वामगठबन्धन विजयी भएका वेला पराजित भएका एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम यतिवेला चुनाव हारेकै कारण चर्चामा छन् । वामगठबन्धनका एक सूत्राधार रहेका गौतमले आफ्नो पराजयको कारण एमालेभित्रको अन्तर्घातका रहेको बताएका छन् भने कारवाहीका लागि प्रमाण जुटाउन आफू लागिपरेको बताएका छन् । एक प्रभावशाली नेता पराजित भैसकेपछि उनको अवबको राजनीतिक भविष्यमाथि विभिन्न अडकलवाजीहरु भैरहेका छन् । पार्टीको विधानअनुसार पार्टी अध्यक्ष बन्नका लागि उनको उमेर हद नाघिसकेको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएको भए गौतमले प्रधानमन्त्री बन्ने दावी गर्ने विश्लेषण गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि यतिवेला उनको बाटो रोकिए पनि राष्ट्रपति बन्नका लागि भने उनका लागि बाटो रोकिएको छैन । तर, आफू संवैधानिक राष्ट्रपति बन्ने ईच्छा नभएको र फेरि पनि प्रतिनिधि सभामै जाने आफ्नो प्रयास रहने भन्दै प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि उनको आगामी कोसिस रहने देखिएको छ । हेर्नुहोस् गौतमको अन्तरवार्ता :
देशभर वामगठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भैरहेको वेला तपाईं पराजित हुनुको कारण के हो ?
पार्टीभित्रकै मानिसहरुको अन्तरघात, अलोकतान्त्रिक र आचारसंहिता विपरीतका आचरणले म पराजित हुन पुगेँ।
कसले गर्यो तपाईंमाथि अन्तरघात ? पार्टीको केन्द्रबाट नै यस्तो भएको तपाईको आशंका हो ?
सबै कुराको अनुसन्धान गर्दै छु । कसकसले अन्तरघात गरेको हो भन्ने प्रमाण जुटाउन म लागिरहेको छु । पार्टीको केन्द्रबाट यस्तो काम हुनै सक्दैन । स्थानीय स्तरबाट ममाथि अन्तरघात भएको हो । अन्तरघाती कोको हुन् भन्ने पनि मैले बुझेको छु । प्रमाण जुटाएर कारवाही प्रक्रियाका लागि पार्टीलाई आग्रह गर्ने छु । अहिले पार्टीका जिल्ला र प्रदेश समितिद्वारा छानविन भैरहेको छ।
यो पराजयपछिको अबको तपाईको बाटो के हुने छ ?
फेरि पनि म प्रतिनिधिसभामा जान चाहन्छु। तरिका म खोज्छु। मेरो अधिकतम उपयोगिता त्यहीँ हुनेछ।
तपाईंलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बनाउन सकिने कुराहरु पनि आएका छन् । यसतर्फ तपाईको सोच के छ ?
देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। २०६४ सालदेखिको मेरो प्रयास मेरो यही प्रयास छ। अहिलेको हाम्रो पद्धति अलिकति संसदीय र अलिकति स्क्यान्डिनेभियाली जस्तो छ। मजस्तो जंगलको चरोका लागि उपयुक्त देख्दिन । घरपालुवा या पिँजडाको सुगा या मैनाचरीजस्तो हुन म चाहन्न।
वामगठबन्धन गर्दा नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व कसले कसरी गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो ?
त्यतिवेला सरकारको नेतृत्व एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो गरेर गर्ने सहमति भएको हो । व्यक्तिकै रुपमा भन्ने हो भने दुई दलका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डलाई आलोपालो नेतृत्व दिने सहमति भएको हो । पहिला एमाले र पछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि कुन दलले कति समय नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय भने भएको छैन ।
अब पार्टी एकता र सरकार गठनका दुई दलबीचको पदीय बाँडफाँट कसरी मिलाइन्छ ?
निर्वाचनामा जाँदा एमाले र माओवादीबीच ६०/४० अनुपातमा सिट वितरण भएको थियो। तर, विजयको परिणामा ७०/३० भएर आएको छ । सरकार गठनमा यो अनुपात लागू होला । तर पार्टी नेतृत्वमा माओवादीलाई ससम्मान स्थान दिइनुपर्छ । एक दलले अर्को दललाई सम्मानपूर्ण व्यवहारबाट एकता गरिनुपर्दछ ।